IPhone touch screen isiri kushanda! Heino mhinduro. - Zvimwe
iphone 5 kutsvaga sevhisi
yangu iphone 6s plus skrini yakasviba
iphone mota charger isiri kushanda
imessage kunze kwekuraira ios 11
IPhone touch screen isiri kushanda! Heino mhinduro.
Zviri zvakasununguka kukanganisika kana yako yekubata-skrini skrini isiri kushanda. Iwe unoshandisa yako iPhone yezvose kubva mukufona kuenda kupuruzira kuburikidza nemifananidzo, asi usarega yako 'yekubata skrini nyaya' kukudzosera pasi. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura kwauri nei yako iPhone inobata skrini isiri kushanda , kugadzirisa matambudziko ari vanogona gadzirisa kumba uye ini ndichakurudzira dzimwe nzira hombe dzekugadzirisa, kana iwe ukamboida.
Pane zvikonzero zvakawanda nei yako iPhone inobata skrini inogona kumira kushanda. Neraki, pane zvekare nzira dzakawanda dzekugadzirisa matambudziko aya.
nei foni yangu ichiramba ichitangazve yega
Nei yangu iPhone inobata skrini isiri kupindura?
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kutsvaga sei iyo yekubata skrini ye iPhone yako haisi kushanda. Kazhinji dambudziko rinoitika kana chikamu chenyama cheyako iPhone skrini inoita kubata (inonzi digitizer ) inomira kushanda nemazvo kana yako iPhone software painomira 'kutaura' kune Hardware sezvainofanirwa. Mune mamwe mazwi, inogona kunge iri dambudziko rehardware kana software, uye ini ndichakubatsira nezvose zviri muchinyorwa chino.
Troubleshooting iPhone software kazhinji haina mari. Zvakare zvakareruka pane kusimudza iyo skrini nemakisi ekudhonza / makumbo (ndapota usaite izvi). Neichi chikonzero, isu tichatanga nekugadzirisa software uye nekuenderera mberi kugadzirisa zvinhu zvepanyama kana zvichidikanwa.
Tsamba pamadonhwe uye kudururwa: Kana yako iPhone ichangodonhedzwa, nyaya yehardware ingangopomera yako yekubata yegirazi nyaya, asi hazviwanzo zvakadaro. Zvishoma nezvishoma kunyorera uye matambudziko anouya nekuenda anowanzo kukonzerwa nematambudziko esoftware.
Chinhu chekupedzisira kuchengeta mupfungwa ndechekuti dziviriro yechidzitiro (yakadai segirazi rakadzikama, nezvimwewo) inogona kudzivirira kushanda kwakanaka kweiyo iPhone yako yekubata skrini. Edza kubvisa chinovhara chinodzivirira kubva kune yako iPhone kana uine matambudziko neinobata skrini.
Kana yako yekubata skrini ichishanda dzimwe nguva , ramba uchiverenga. Kana iyo yekubata skrini ye iPhone yako isingashande chero nguva, enda kuchikamu chiri pazasi chinonzi Kana yako iPhone yamira kupindura kubata .
Mashoko mashoma nezve iPhone inobata chirwere
IPhone touch chirwere inoreva matambudziko akati wandei anonyanya kukanganisa iyo iPhone 6 Plus. Aya matambudziko anosanganisira kubvarura grey bharati kumusoro kwechidzitiro uye matambudziko nemaitiro eifoni, senge pini-ku-zoom uye kugona.
Pane imwe gakava nezvezvinokonzera iPhone kubata chirwere. Apple inoti inova mhedzisiro ye 'kudonha kanoverengeka pane yakaoma nzvimbo, izvi zvinowedzera kushushikana pane mudziyo'. Vanoziva dambudziko uye vane chaiyo yekugadzirisa chirongwa kana iwe uine iri dambudziko ne iPhone yako. iFix yakavhura iyo iPhone 6 Plus ndokuwana iyo yavanoti a 'Dhizaina dhizaini' .
Kunyangwe chii chiri kunyatso kukonzera dambudziko, unogona kutora yako iPhone kuApple uye zvigadzirise pamubhadharo weU $ D 149 .
Matambudziko eSoftware uye nekubata skrini ye iPhone yako
Dambudziko nesoftware inotaurira foni yako zvekuita inogona kukonzera yako iPhone yekubata skrini kuti irege kushanda. Zvinogona kubatsira kuseta zvinonetsa software kana yako iPhone's touchscreen isiri kushanda.
Yako yekubata skrini inomira kupindura iwe paunoshandisa imwe application? Iyo app inogona kunge iri mhosva. Edza kusunungura uye kuisazve. Kubvisa chikumbiro:
Tsvaga iyo application mu kutanga skrini kubva ku iPhone yako. Iyo skrini yepamusha ndiyo yaunoona mune skrini iripazasi.
Dhinda uye ubatisise iyo icon icon kusvikira menyu yaonekwa.
Bata Bvisa App .
Bata Bvisa .
iphone wont inotakura yapfuura apple screen
Kana yako iPhone yekubata skrini isingashande mushure mekuisazve iyo app, tumira meseji kune wemugadziri weapp. Ivo vanogona kuve nemhinduro kuchinetso kana kuti vari kutoshanda pane mhinduro.
Ndinoendesa sei meseji kune wemugadziri weapp?
Bata kuvhura iyo App Store .
Bata Tsvaga pasi pechidzitiro uye tsvaga iyo app.
Ridza iyo app icon kuvhura iyo ruzivo nezve iko kunyorera.
Mupumburu kusvika pasi uye vawane Webhusaiti yekuvandudza . Iyo yekuvandudza webhusaiti inozorodha.
Tsvaga fomu rekubatana kana email kero pawebhusaiti yemusimudziri. Hazvifanirwe kunge zvakaoma kuti uwane kana mushambadzi akakosha. Rangarira kuti vagadziri vakanaka vanokoshesa kuziviswa nezvematambudziko nemaapplication avo!
Gadziridza yako iPhone
Izvo hazviwanzo, asi pano neapo iPhone software inogadziridza inogona kukonzera touchscreen nyaya. Nyaya yazvino yakanyorwa yeiyi yaive Apple yeApple 11.3 yekuvandudza. Dambudziko rakakurumidza kugadziriswa neyekupedzisira kugadzirisa kubva kuApple.
Inovhura Zvirongwa uye bata General> Software kugadzirisa. Bata Dhawunirodha uye gadza kana paine iOS yekuvandudza inowanikwa pane yako iPhone.
Kana yako iPhone yamira kupindura kubata
Nyaya dzescreen dzinowanikwa mune akawanda maapplication kana kana iwe usina app yakavhurwa inogona kukonzerwa nematambudziko neiyo iPhone software. Nhanho yakanaka yekutanga yekugadzirisa matambudziko ndeyekudzima yako iPhone uye kudzoka nayo, asi zvakaoma kuita kana yako yekubatabata isiri kushanda! Pane kudaro, isu tichafanirwa kuita a zvakaoma reset . Aya ndomaitiro aunozviita iwe:
Kana yako iPhone ikasavhara munzira yakajairwa, kana kana kudzima yako iPhone kudzoka uye kumashure isingagadzirise dambudziko, edza kuita yakaoma reset. Kuti uite izvi, Dhinda uye bata masimba uye mabhatani epamba panguva imwe. Mirira masekondi akati wandei kuti logo yeApple iwoneke pachiratidziro, wozovasunungura.
Pane iyo iPhone 7 kana 7 Plus, kuomesa kwakaomarara kunoitwa nekudzvanya uye kubata iyo bhatani remagetsi uye iyo vhoriyamu pasi bhatani kwemasekondi akati wandei kusvikira logo yeApple yaonekwa pachiratidziri.
Kuomesa reset iPhone 8 kana nyowani, pinda uye buritsa vhoriyamu kumusoro bhatani, pinda uye buritsa vhoriyamu pasi bhatani, wobva wadzvanya wobata parutivi bhatani kudzamara iyo skrini yasviba uye yoonekwa Apple logo pakati pechidzitiro.
A rakaoma Reset pakarepo anomisa zvose kumashure pezvakaitwa musi iPhone wako uye unokwanisa kukonzera software matambudziko. Kazhinji kwete, asi ingori zano rakanaka ita zvakaoma reset yako iPhone kana iri zvakafanira .
Mushure mekunyorwa kweminwe, mvumo yekushanda inotora nguva yakareba sei?
Yangu iPhone touchscreen haisati yashanda!
Iyo yekubata skrini ye iPhone yako inoramba ichikupa matambudziko? Pamwe inguva yekuedza kudzoreredza yako iPhone kune ayo ekutanga magadziriso. Usati waita izvi, ive shuwa kugadzira backup kubva ku iPhone yako. Unogona kuita izvi nekubatanidza yako iPhone kune komputa uye unomhanya iTunes (PC neMac neMojave 10.14), Tsvaga (Mac ine Catalina 10.15), kana uchishandisa iCloud .
Ini ndinokurudzira kuita DFU (Default Firmware Gadziridza) kudzoreredza. Mhando iyi yekudzoreredza yakati rebei kupfuura yechinyakare kudzoreredza iPhone. Kuti uite izvi, iwe uchazoda yako iPhone, tambo kuti ubatanidze iyo kune komputa, uye yazvino vhezheni yeTunes.
Kuisa yako iPhone muDFU modhi kunogona kunge kuri kunetsa. Kune yakapusa nhanho-nhanho dzidziso, tarisa chinyorwa chedu chinotsanangura chaizvo maitiro ekuisa yako iPhone muDFU modhi . Kana wapedza, dzoka kuno.
Kana yako yegirazi yekubata Hardware iri iyo mhosva
Kana iwe wadonhedza yako iPhone munguva pfupi yapfuura, iwe unogona kunge wakanganisa iyo skrini. Chidzitiro chakatsemuka ndechimwe chezviratidzo zviri pachena zvekuti skrini yakakuvadzwa uye inogona kukonzera mhando dzese dzematambudziko ekiriniki.
Kudonha kunogona zvakare kusunungura kana kukuvadza zvidimbu zvepasi zvidimbu zveyako yekubata skrini. Izvo zvaunoona nekubata mumaoko ako chinongova chikamu cheiyo yekubata skrini. Pasi, pane LCD skrini inogadzira iyo mifananidzo yaunoona. Kune chimwe chinhu chinonzi digitizer . Iyo digitizer Icho chikamu cheiyo iPhone iyo inoona kubata.
kubatanidza iphone kumota bluetooth
Iyo LCD skrini uye digitizer vanobatana neako iPhone mamaboard / mamaboard, ndiyo komputa inoita kuti yako iPhone ishande. Kudonhedza yako iPhone kunogona kusunungura tambo dzinobatanidza iyo LCD skrini uye digitizer kubhobhobhoyo. Iyo yakasununguka kubatanidza inogona kukonzeresa yako iPhone yekubata skrini kuti irege kushanda.
Iyo MacGyver Solution
Kana iPhones yadonhedzwa, tambo diki dzinobatanidza kune yako iPhone mama mama / mamaboard anogona kubuda akasununguka zvakakwana kuitira kuti iyo yekubata skrini inomira kushanda kunyangwe pasina kukuvara kwemuviri. Yakareba pfuti, asi zvinogoneka kuti iwe unogona kugadzirisa yako iPhone inobata chidzitiro nekutsikirira chikamu cheiyo skrini uko tambo dzinobatana kune iro mama raamai / mamaboard.
Yambiro : chenjera! Kana iwe ukamanikidza zvakanyanya, iwe unogona kutyora iyo skrini, asi iyi inogona kuve imwe yeaya mamiriro apo iwe usina 'chaunorasikirwa', uye ha aindishandira kare.
Sarudzo kugadzirisa rakaputsika iPhone kubatwa chidzitiro
Kana iwe waedza izvo zvataurwa pamusoro apa uye kubata kweiyo iPhone yako hakushandi imhaka yekuti yakatsemuka zvachose, unogona odha kit uye edza kuchinja zvikamu zvacho pachako, asi Ini ndaisazvikurudzira . Kana chimwe chinhu chikatadza uye iwe wakatsiva chero chikamu chei iPhone yako nechisiri cheApple chikamu, Apple mahunyanzvi haatombo tarise kune yako iPhone - ivo vanokupa iwe nyowani iPhone pamutengo uzere wekutengesa.
Apple mahunyanzvi vanoita basa rakakura kugadzirisa akaputsika masikirini, asi ivo vanobhadharisa yakawanda kubasa kwavo. Iva nechokwadi cheku Chirongwa Kugadzwa kutanga kana ukafunga kushanyira Apple Store.
Kana iwe uchida kuchengetedza imwe mari, ini ndinokurudzira zvikuru mhando-yechitatu-bato yekugadzirisa masevhisi senge Pulse kana iwe uchida kuchengetedza imwe mari. Puls ichauya kumba kwako kana nzvimbo yaunosarudza uye wozogadzirisa yako iPhone mumaminitsi makumi matatu chete newaranti yeupenyu, zvese nemari shoma pane yaunokuchaja neApple.
Kana zvikamu zvakakuvadzwa zvatsiviwa, yako iPhone yekubata skrini inofanira kushanda senge nyowani. Kana zvisiri, iyo software ingangove ine mhosva.
Kutenga iPhone nyowani imwe sarudzo yakanaka. Kugadziriswa kwescreen kazhinji hakusi zvakare zviso. Nekudaro, kana zvidimbu zvakatyorwa pawakadonhedza yako iPhone, zvese zvinofanirwa kuchinjwa. Rakareruka skrini kugadzirisa kunogona kubuda kuve kwakanyanya kudhura. Kuisa mari iyo mu smartphone nyowani inogona kunge iri mhinduro inobatsira kwazvo. Kubvunza iyo UpPhone chishandiso kuenzanisa nharembozha yega yega uye nemutengo wavanobhadhara kune wese webasa saiti.
Kudzoka mukubata ne iPhone yako
Iyo yekubata skrini ye iPhone yako tekinoroji yakaoma uye inonakidza. Ndinovimba ichi chinyorwa chakakubatsira iwe kana yako iPhone yekubata-skrini yakanga isiri kushanda, uye ndingafarire kuziva kuti ndeipi mhinduro yakashanda kwauri muchikamu chekutaura pazasi.